Lammiilen alaabaa fi asxaa paartii deeggaranii qabatanii ba’uuf mirga qabu- Finfinnee – Fana Broadcasting Corporate
Lammiilen alaabaa fi asxaa paartii deeggaranii qabatanii ba’uuf mirga qabu- Finfinnee
Finfinnee, Fulbaana 3,2011 (FBC)- Paartin siyaasaas ta’e deeggartoonni kamiyyuu alaabaa fi asxaa isaan ibsu qabatanii ba’uuf mirga guutuu qabu jedhan itti aantun Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii bulchiinsa magaala Finfinnee aadde Haaymaanoot Zallaqaa.
Mootummaan tarkaanfii dirree siyaasaa bal’isuuf fudhateen paartileen siyaasaa adda addaa gara biyyaa deebi’aa jiru.
Haaluma kanaan Addi Bilisummaa Oromoo Fulbaana 5 ,2011 gara biyyaa kana galu waan ta’eef, deeggartoonni isaa simannaaf yeroo qophii taasisaa jiranitti qaama faallaa kanaa ta’een walitti bu’iinsi magaala Finfinnee iddoo tokko tokkotti muudatee jira.
Kana sababeeffachuun ibsa kan laatan itti aantun Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii magaalichaa aadde Haymaanoot Zallaqaa, lammiilen kamiyyuu mallattoo fi alaabaa siyaasaa deeggaranii qabatanii simachuuf mirga guutuu qabu jedhaniiru.
Kanaan alatti qaama hawaasa walitti buusuf socho’u irratti tarkaanfin seeraa kan fudhatamu ta’uu hubachiisaniiru.
Koomishiniin Invastimantii Ityoophiyaa dhaabbilee Chaayinaa adda addaa waliin…
Ayyaanni Fannoo guutuu Ityoophiyaatti kabajamaa jira
Heelikoopteera Eerweeyiis Traansineeshiin irra balaan gahe